အကျိုးစီးပွားမျှဝေခံစားမည့်အနာဂတ်အား တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ လက်တွဲကာဖော်ဆောင်မည် - Xinhua News Agency
ယခုနှစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် နှစ်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးသည် တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတရိပ်ရိပ်တိုးတက်ခဲ့သည့်အပြင် ကဏ္ဍစုံကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များလည်း တိုးမြှင့် တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာ က “အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ “အဝတ်အစားအသစ်တွေဟာ အဟောင်းတွေထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေကတော့ မိတ်ဆွေသစ်တွေထက်ပိုကောင်းတယ်”ဆိုတဲ့ စကားပုံရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသက်သေပြသနေသလိုဖြစ်ပြီးတော့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ထင်ဟပ်ပြသတာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် “ ဟုဆိုသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ဒက်ဟွန်ဆင် က “လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၃၀ အတွင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်မှုတွေဟာဆိုရင် ကျယ်ပြန့်တဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို အနာဂတ်မှာ ဘုံကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနေပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်းဆွီကိ က “ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျယ်ပြန့်စေဖို့နဲ့ နက်ရှိုင်းစေဖို့ အတူတကွ ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာလုပ်ကိုင်ကြပါစို့။ နောက်ပြီး လာမည့် နှစ်၃၀ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းမှာကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားကြပါစို့” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အာဆီယံနိုင်ငံများသည် အတူတကွရပ်တည်ခဲ့ကြပြီး ခက်ခဲသည့်အချိန်များ၌လည်းအတူတကွဖေးမခဲ့ကြသည်။
ကာလရှည် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် ရိုက်ခတ် မှုများဖြစ်ပေါ်ချိန်၌ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံနိုင်ငံများအား ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ တရုတ်နိုင်ငံက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ရေပေါင်း သန်း ၃၀၀ ကျော်စာကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး အရေးပေါ်ဆေးဝါးအထောက်အပံ့များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများစွာကိုလည်း ထောက်ပံ့စေလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူ ကာလီတို ဂယ်ဗက်စ် က “ ကျွန်တော်အလေးအနက်ပြောကြားလိုတာကတော့ ဒါဟာ နိုင်ငံအတွင်းကာကွယ်ဆေး အကြိမ် ၁၀၀ မြောက် ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ပြီးဆက်ပြောလိုတာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက ဝယ်ယူတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့အတူ လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေပါ ပါဝင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေး ကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှတ်ရမိပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ နင်မ်ဆောရာ က“အခုလိုမျိုး ကာကွယ်ဆေးကိုကျယ်ပြန့်စွာထိုးနှံနိုင်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာ မကြာတော့တဲ့ကာလမှာ ကဏ္ဍစုံလူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်၊ အကူအညီလိုအပ်ချိန်မှာကူညီသူဟာတကယ့်မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဆေးတွေထောက်ပံ့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်သလို ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကိုလည်း ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကိုအခမဲ့ထိုးနှံပေးလို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ကာကွယ်ဆေးများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းအပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ နိုင်ငံများအတွက် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အရှိန်မြှင့်ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် စီမံဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
တရုတ်-ထိုင်းနိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ထမ်း ကျန်းလီယု က “ပထမဆုံးအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်ဟာသိပ်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်၊ အဲဒီဈေးကွက်ဟာအခြားနိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့အဖွဲ့အစည်းအချို့အတွက်လည်း ဆက်စပ်ဖွင့်လှစ်ထားသလို အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေအတွက်ရော အခုမှလုပ်ငန်းစမယ့်သူတွေအတွက်ပါ ကျယ်ပြန့်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဦးစားပေးမူဝါဒများစွာကိုလည်းချမှတ်ထားပါတယ်။ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံကို အဝင်အထွက်ကိစ္စလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဗြူရိုတွေကလည်း ကျွန်မတို့ကိုများစွာကူညီကြပါတယ် အထူးသဖြင့် လိုအပ်တဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေအတွက်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေအပြင် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်တာတွေမှာရောပေါ့” ဟုဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှား စီးပွားရေးသမား အက်ဟီ နူဂရိုဟို က “တရုတ်-အာဆီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျေးဇူးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကော်ဖီထုတ်ကုန်အချို့ကို အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မူဝါဒနဲ့ သယ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ဝယ်ယူသူတွေလည်းပိုကောင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ထို့အတူ နှစ်ဖက် ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုလည်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံကွမ်ရှီးဒေသရှိ Pingxiang ကဲ့သို့သော အသိဉာဏ်စနစ်သုံး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံများကိုလည်းစတင်နိုင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် မလေးရှားကဲ့သို့သော အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ဆက်သွယ်ရန် ထိုစင်္ကြံကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။
ကွမ်ရှီးဒေသနေ နယ်စပ်သစ်သီးရောင်းဝယ်သူ လျှို့ပင်း က “ ကျွန်တော်တို့ က ဗီယက်နမ်တို့ ကမ္ဘောဒီးယား တို့လိုမျိုး အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ဒေသထွက်သီးနှံတွေ၊ သရက်သီးတွေ၊ နဂါးမောက်သီးတွေ၊ ဒူးရင်းသီးတွေ ကိုဝယ်ယူပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအသီးတွေကို တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ရုရှားလိုမျိုးနိုင်ငံတွေဆီကိုပြန်ရောင်းတာပါ၊ ဒီနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေးစင်္ကြံတွေက ကျွန်တော်တို့ကို လက်တွေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာများစွာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါတယ် ဒီတော့ ကုန်စည်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်တာပေါ့၊ အခုဆိုရင် ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ကုန်စည်တွေ ကို ကမ္ဘောဒီးယားကနေ တရုတ်နိုင်ငံကို ကုန်းလမ်းကနေ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ဖို့ အချိန် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ကွမ်ရှီးနိုင်ငံတကာကုန်သည်များအဖွဲ့၏ နယ်စပ်ဒေသကုန်သွယ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဝမ်ကျန်းပေါ်က “ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဒေသကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးစနစ်တစ်ခုဟာ တရုတ်-အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုကျယ်ပြန့်စေရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီလို ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကွင်းဆက်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အဓိက အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား အသိဉာဏ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရေးကိရိယာအစုံ ၃,၀၀၀ ကျော် ကို ချမှတ်ထားခဲ့ရာ အဲဒီကနေမှ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် ကုန်စည်အချက်အလက်တွေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အလက်တွေရရှိပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအထောက်အပံ့ပြုနေတဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလည်ပတ်စေတာဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီအချက်အလက်တွေဟာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအထောက်အပံ့လုပ်ငန်းကို ချောမွေ့မှုရှိစေဖို့ အလွန် အရေးပါပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်ပြန်သည့်တရားဝင်အချက်အလက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံအောက်သာရှိရာမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၈၄.၆ ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ရာ ၈၅ ဆ တက်လာပြီး နှစ်ဖက်စလုံး၏ အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံ အပါအဝင် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံ ပူးပေါင်းကာ ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်(RCEP) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံသည် ပထမဆုံး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သောနိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဒေသတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည့် (RCEP)တွင် စုစုပေါင်း GDP သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆.၂ ထရီလီယံ(သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ GDP ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိရာ ၎င်း သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လုံခြုံရေးအကြံပေးကော်မတီဥက္ကဌ ပက်နီတန် ဝပ်တာနီရာဂွန် က “RCEP ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ က စတင်ခဲ့ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခေတ်သစ်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်မှု အစုအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ဒီ တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက်တင်အရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူး အတိတ်တုန်းကလိုပါပဲ အဲဒီဆက်ဆံရေးဟာ အနာဂတ်မှာသိပ်ကိုအရေးပါအရာရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီး လိုရန်လင်း က “ဒီနှစ်ဟာ တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးနှစ် ၃၀ ပြည့်မြောက်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၃ခုအတွင်း ပထမဆုံး အပြန်အလှန် ကုန်စည်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သဘောတူညီမှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ် ၊ ဒီလိုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ကဏ္ဍများစွာမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကြွယ်ဝတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး ဖော်ကျူနာတို ဒယ်လာပီနာ က “တရုတ်နိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ အလွန်အရေးပါတဲ့ ပြင်ပ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး ဒီနှစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံရေးနှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုတွေအပြင် လာမယ့်နှစ်တွေမှာ ပိုမိုငြိမ်းချမ်းတဲ့၊ လုံခြုံတဲ့၊ တည်ငြိမ်တဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့မှတ်တိုင်တွေအဖြစ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြရအောင်ပါ” ဟုဆိုသည်။(Xinhua)
GLOBALink | China, ASEAN join hand to buildashared future
Over the past 30 years, China-ASEAN relations enjoy sound and steady development, and pragmatic cooperation in various fields continues to advance.
China and ASEAN countries have stood together and supported each other through hard times.
Amid the prolonged COVID-19 outbreaks and the ensuing social and economic impacts, China has helped the ASEAN countries with their battle against the pandemic.
So far, China has provided ASEAN member states with over 300 million doses of COVID-19 vaccines,agreat number of emergency medical supplies and the support of medical teams.
In addition to the provision of vaccines, China has acted asaspringboard for countries to speed up trade, investment, transport and tourism.
Meanwhile, trade between the two sides has been facilitated, with the launch of intelligent cross-border logistics platforms like this one in Pingxiang in China’s Guangxi.
The platform currently serves China and ASEAN countries such as Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia and Malaysia.
According to China’s official data, trade between China and ASEAN skyrocketed by 85 times to 684.6 billion U.S. dollars in 2020 from less than 8 billion U.S. dollars in 1991, making the two sides each other’s largest trading partners.
China was also the first non-ASEAN member to complete ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) inked by 15 Asia-Pacific countries, including China and ASEAN’s 10 member states in November last year.
Coveringaregion withacombined GDP of 26.2 trillion U.S. dollars, or about 30 percent of global GDP, RCEP is the world’s largest free trade deal.